माइतीसंग ऋण मागेर दुवई पठाएको श्रीमानले ‘म नेपालमै छु केटीले मलाई राख्यो ६ हजार पठाउ’ भन्दै अचानक फोन गरेपछि (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > माइतीसंग ऋण मागेर दुवई पठाएको श्रीमानले ‘म नेपालमै छु केटीले मलाई राख्यो ६ हजार पठाउ’ भन्दै अचानक फोन गरेपछि (भिडियो)
माइतीसंग ऋण मागेर दुवई पठाएको श्रीमानले ‘म नेपालमै छु केटीले मलाई राख्यो ६ हजार पठाउ’ भन्दै अचानक फोन गरेपछि (भिडियो)
admin February 19, 2021 February 19, 2021 भिडियो, समाचार, समाज	0
छोरी जन्मिएपछि अब ब्यवहार यत्तिकै चल्दैन पैसा कमाउनु पर्छ भनेर उनले श्रीमान हरिलाई विदेश पठाउने निर्णय गरिन् । उनले माइतीसंग हार गुहार गरेर पैसा मागिन् । श्रीमानलाई विदेश पठाइन् । उनीहरु केही समय निकै रमाए । श्रीमानले पैसा पनि पठाउन थाले । जिवन अब सहज हुन्छ भन्ने सोच्दै थिइन् तर उनको जिवनमा नसोचेको घटना भयो । अहिले श्रीमान नेपाल आएको उनले थाहा पाएकी छन् । तर घरमा भने आएका छैनन् ।सपना कार्की हुन् ।
क्षेत्री र हरि नेवार भएका कारण परिवारले स्वीकार गर्दैनकी भन्ने लागेको थियो । तर परिवारले उनीहरुलाई स्वीकार गरे अनि विवाह सम्भव भयो । त्यसरी विवाह गरेको श्रीमान अहिले सम्पर्क विहिन छन् । उनी आफ्नो जिवन विग्रिए पनि अब छोरीको भविष्य नविग्रियोस् भन्ने उनलाई लाग्छ । त्यसैले उनी छोरीको लागि बाबुको खोजीमा छन् ।
मलाई त उहाँको केही आश छैन तर छोरीको अधिकारका लागि म ल ड् न चाहन्छु । माइतीले घर जग्गा धितो राखेर श्रीमानलाई दुवई पठाएकी थिइन् । माइतीको ऋण पनि उनले तिरिदिएका छैनन् । अहिले उनी सम्पर्कमा छैनन् । लकडाउनको बेलामा माइतीले सहयोग नगरेको भए खान समेत नपाउने उनको भनाई छ ।
बिनयसंग बिवाह हुन लागेकि पुजालाई किन भनियो कान्छी श्रीमती ? पूजाले दु:ख मान्दै दिईन यस्तो प्रतिकृया (भिडियो)
शे’राघा’टमा भा’गरथिको अन्तिम सं’स्कार, रास्ट्रिय झण्डा ओ’डाएर गरियो अन्तिम सँस्कार! (भिडियो हेर्नुस्)